Cirad: atrikasa mikasika ny ala sy ny zavamaniry | NewsMada
Cirad: atrikasa mikasika ny ala sy ny zavamaniry
Natao teto Antananarivo, tamin’ity herinandro ity ny atrikasa mikasika ny lanjan’ny zavamaniry sy ny ala. Atrikasa ahitana vaomiera ho an’ny fiaraha-miombon’antoka (DP) telo. Miara-mifarimbona nanatanteraka azy ny Cirad, ny Fofifa ary ny Oniversite Antananarivo, eo ambany fiahian’ny minisiteran’ny Fambolena sy ny fiompiana ary ny jono (Maep) sy ny ao amin’ny Tontolo iainana (MEDD).
Novelabelarina ny mikasika ny ilana sy ny ampiasana ny zavamaniry sy ny ala eto amintsika, sy ny laharam-pahamehana tokony hatao hiarovana sy hitantanana ary hampiroboroboana azy.
Hanatanterahana izany, mila harindra ny fiarovana ny zavamananaina sy ny fanomezan-danja ny harena voajanahary miaraka amin’ny fambolena. Antony, mba hampaharitra azy ireny sady hitondra fampandrosoana sy tombontsoa eto amin’ny firenena.
Maromaro ny manam-pahaizana nanao vela-kevitra tamin’ity fotoana ity. Anisan’izany ny mikasika ny karazan-kazo sokajina fa mibosesika, izany hoe mora miparitaka nefa tsy ilaina, toy ny “Acacia mangium”, ny “pinus kesia”, nefa lasa nameno ny ala eto Madagasikara, tato anatin’ny 150 hatramin’ny 200 taona farany.
Fandrindrana ny karazany
Araka ny fanadihadian-dRtoa Rajaonarivelo Manou, manana ny doctorat amin’ny lafiny biolojia, napetrany ny fanontaniana hoe “misy ilana azy amin’ny tsara ve ireo zavamaniry na hazo sokajina ho mibosesika”? Noraisiny ohatra ireo ala tapia any Arivonimamo, ilaina amin’ny fiompiana landy dia, mitondra tombontsoa toekarena.
Nifantoka tamin’ny fambolen-kazo anaty ala any amin’ny tapany atsinanan’ny Nosy ny fanazavan’ny mpikaroka, i Jean Marc Bouvet, mikasika ny anjara toeran’ny karazan-kazo eto an-toerana sy ny avy any ivelany, izay saika ahitana izany avokoa ny ala eto Madagasikara. Noraisiny, ohatra, fa tena ilain’ny mponina any an-toerana amin’ny fivelomany ny hazo jirofo, ny manga, ny letisia, sns. Ilaina arindra noho izany ireo sokajy roa ireo hitandroana ny ala eto amintsika.
Nanaitra ny sain’ny rehetra kosa ny mpikaroka Pascal Danthau, ny ilàna ny karazan-javamaniry nampidirina eto Madagasikara, an-daniny, sy ny hiarovana ny tsy fahita raha tsy eto amintsika, an-kilany.